Freedom MM Version မသုံးတက်လို့ကူညီကြပါ — MYSTERY ZILLION
Freedom MM Version မသုံးတက်လို့ကူညီကြပါ
အကိုတို့အမတို့ရေ ကျနော်ကဒီအဖွဲ့ထည်း၀င်တာမကြာသေးပါဘူး၊ Inernect သုံးတက်တာလည်းမကြာသေးဘူး အခု Access Denied ဆိုဒ်တွေတွေ့လို့ Freedom MM Version လေးတင်ပြီးမှ မသုံးတက်လို့ ကူညီကြပါအုံး။
Wellcome Winzerdအတိုင်းလည်း အကုန်ဖြည့်ပြီးပါပြီ၊ connected sever လည်းတွေ့ပါတယ်၊
အခုမှစသုံူးမှာမို့လို့ သင်ပေးကြပါဦး :O:O:O လုပ်ကြပါဗျာ:((:((:((:((:(( ကျေးဇူးအရမ်းတင်မှာပါ။:D:D
နောင်နောင်းရေ တင်တဲ့ Thread နေရာ မှားနေပါတယ်၊ ဒီနေရာက ဒီဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမသိတာများကို မေးမြန်းရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံ အောက်က Internet & E-mail (သို့မဟုတ်) Computer မှာရေးသင့်ပါတယ်။
Freedom ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သူ ့ရဲ့ဆိုဒ်မှာလဲ Register လုပ်ရပါတယ်၊ ဒီအတိုင်း Server နဲ့ချိတ်ရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ Register ရောလုပ်ပြီးပြီလားမသိဘူး။ မလုပ်ရသေးရင် လုပ်လိုက်ပါအုံး။
အရင်တုန်းက Freedom ကအချိန်တိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်၊ အခုတော့ အချိန်တိုင်းသုံးချင်ရင် ပိုက်ပိုက်ပေးမှပဲရတော့တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တော့ သိပ်မကြိုက်တော့ဘူး။
ရိုးရိုး ဆိုဒ်ကြည်ရုံလောက်ပဲဆိုရင် အောက်ဟဟာလေးသုံးကြည်ပါလား မဆိုးပါဘူး။
ကိုChallenger နဲ့ ကိုရေလိုအေးတို့ရေ
ကို ချယ်ရေ ကိုချယ် Side က unrusted connection လို့ရေးထားတယ်၊ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟင်:39::39::39::39:
naungnow wrote: »
untrusted connection လို google မှာ ရှာကြည့်လိုက်တာ ဒီလိုတော့ ထွက်လာတယ် သုံးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ အဆင်ပြေရင်တော့ ကောင်းပေါ့ မပြေလည်းအရင်းပေါ့ ဟဲ ဟဲ .
To Testaconnection try:
Open the ODBC icon from the Control Panel
SelectaNew ODBC Connection
Select the "SQL Server" driver from the list.
Give the new connectionaname and description
Select the Database Server in the drop down list
Click the Next button at the bottom
Make sure the radio button marked "With SQL Server authentication" is selected
Type in the user name and password at the bottom of the screen
Click the next button until you're asked to test the connection.
The system should now attemptaSQL server connection (notatrusted connection).
If the system doesn't connect, then there may beaproblem with the server settings. :103::103:
ဒီမှာ သွားကြည်.လိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်လည်း အစက မသုံးတတ်ဘူး။နောက်မှ ဒါလေးက လွယ် လွယ်လေးမို.လို. သုံးတတ်သွားတာ။ သူပြော သလို username ---sesawe
passward sesawe နဲ. သုံလို.ရတယ်။အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောနော်။
အဲဒါမှ မရသေးရင် အသုံးပြုပုံကို ပုံလေးတွေနဲ. ကျွန်တော် ပြပေးမယ်နော်။
အကိုရေ.. freedom MM ကို သုံးရတာ..နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်သလားလို့... freegate လေး ကို သုံးကြည့်ပါလား.. ဒီမှာ ယူလိုက်နော်.. အရမ်းကောင်းပါတယ်.. ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး..ကွန်သိပ်မကောင်း လည်း.. သူက သုံးလို့ကောင်းပါတယ်.. MPT ဆိုရင်တော့.. software မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း.. ဒီဆိုဒ်လေး.. တွေကနေသွားဖွင့်လည်း ရတယ်နော်...
ပျံလေတဲ ့ငှက်ခါး..ခဲမှန်တွားတယ်မဟုတ်လား..အဲဒီ Freegate
အခု ပြန်ထလာပြီလားဟင် ???:D:D:D:D
FreeGate က ငှက်လေး ပျံနေတဲ ့ပုံလေးလေ။
အဲဒီ့ freegate က သုံးလို့မရတာ ကြာပြီမဟုတ်ဘူးလားဗျ.. အခုပြန်ကောင်းသွားပြီလား.. အရင်က ပိုက်ပိုက်ပေးရမယ်ဆိုလား. ပြောတယ်ဆို.. ကျွန်တော်ကတော့ ကျော်စရာရှိရင် ဆော်ဒီပရောက်ဆီလေးနဲ့ကျော်.. အကောင့်တွေဘာတွေဖွင့်ချင်ရင် u95 လေးသုံး. ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ ရိုးရိုးပရောက်ဆီနဲ့ ဟိုဟာဒီဟာတွေကြည့်ချင်ရင်
ကိုသုံးတယ်ဗျ အဲဒါဆို အကုန်အဆင်ပြေတာပဲ.. MSN account, G-mail အကောင့် အကုန်ရတယ်ဗျာ.. ဘာမှမလိုဘူး.. ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြည့်လို့ရတယ်.. :D
U95 ကို လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာယူနော်..
အခုလောလောစယ်မှာတော့ဒီကပြပေးတဲ့ Side တွေကနေသွားလို့ရနေလို့ ဖရီးဒမ်းကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပါဦးမယ်
ဒီထက်ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းပြောကြပါဦး:D:D:D Ut95ကို install လုပ်တာ ဘောက်တစ်ခု ပေါ်လာပြီး ပါဆင်းနစ် တွေက ၉၉.၉ မှာရပ်နေကြတယ် Desktop ဒေါင့်မှာလည်း lock ပုံစံကြီးပေါ်နေလို့ပိတ်လိုက်ရတယ် လုပ်ကြပါဦးဆရာတို့:((:((:((:((:((
Ut95ကို install လုပ်တာ ဘောက်တစ်ခု ပေါ်လာပြီး ပါဆင်းနစ် တွေက ၉၉.၉ မှာရပ်နေကြတယ် Desktop ဒေါင့်မှာလည်း lock ပုံစံကြီးပေါ်နေလို့ပိတ်လိုက်ရတယ် လုပ်ကြပါဦးဆရာတို့:((:((:((:((:((
ဆရာတော့ဟုတ်ပါဘူး.... :D:D နားလည်ရခက်သွားလို့ပါ... U95 ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဘောက် ကလေးက Ultra surf ရဲ့ ပုရုပ်ဆီ ဆာဗာတွေဆီလှမ်းချိတ်တာကိုပြတာပါခင်ဗျာ.... သူချိတ်မိသွားပြီဆိုရင် IE အင်တာနက်အိတ်စပိုလာ အလိုလိုပွင့်လာပါတယ် အဲ့ကနေတဆင့် သွားလိုရာသွားလို့ရပါပြီဗျာ.. သော့ဂလောက်ပုံပေါ်လာတာကလဲ သူရမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ တံဆိပ်ပါခင်ညာ... ကွန်ပျူတာကိုသော့ ခတ်တာမျိုးဟုတ်ပါဘူး ဘာမှပူနဲ့နော် ကြောက်စရာမလိုဘူး :D:D
U95 သုံတာအဲ့လောက်ဆိုအစဉ်ပြေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ..:D:D:D အစဉ် မပြေဘူးဆိုရင်တော့ နားလည်အောင်ရှင်မပြ နိုင်တဲ့ ဒီမတာကို ခွေးတစ်ဒါဇင်လောက်သာလွှတ်ပါဗျာနော်.... :D:D
်ပျံလေသည့် ငှက်ခါးက..အရင်က ဘယ်ပြန်သွားတာလဲတော့ မသိဘူးဗျ.. အခုတော့ အဲဒီ.. freegate လေးက.သုံးလို့ ပြန်ကောင်းနေတယ်ဗျ.. ဟိုတလော့ gtalk တွေ gmail တွေ ပိတ်တုန်းက ဆိုရင်. ကျွန်တော်တို့ MPT သမားတွေက.. ဆော်ဒီလည်း.. သုံးမရတော့ freegate လေးနဲ့ ပဲ လုပ်စားလိုက်ရတယ်...ဗျ...အခု လည်း gtlk မှာ. voice mail ပြောဖို့ အတွက်..သူ့ကိုပဲ..သုံးနေရတယ်ဗျ...သုံးလို့တော့.... ကောင်းနေတုန်းပဲဗျ.. U95 က မှ.ကော်နက်ရှင်နည်းနည်း လေး နေရင်. မတက်တော့ဘူးဗျ..သူက မှ တက်သေးတယ်.အခု ပြန်သုံးလို့ အဆင်ပြေနေပါတယ်.ဗျ..စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ...အဆင်ပြေကြပါစေ......